ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအစီအစဉ်က ထိခိုက်အလွယ်ဆုံးသူများကို ပထမဆုံးအကာအကွယ်ပေးရန် ရည်ရွယ် - Xinhua News Agency
ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအစီအစဉ်က ထိခိုက်အလွယ်ဆုံးသူများကို ပထမဆုံးအကာအကွယ်ပေးရန် ရည်ရွယ်
ဘာလင်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် – ခေါန်ရိန်
ဂျာမနီနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး Jens Spahn က COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းလှုပ်ရှားမှု၏ အသေးစိတ်အစီအစဉ်ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့က ကြေညာခဲ့ပြီး အဆိုပါ လှုပ်ရှားမှု၏ ပထမဆုံး ရည်ရွယ်ချက် ပန်းတိုင်မှာ ထိခိုက်အလွယ်ဆုံးသူများကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘိုးဘွားရိပ်သာတွင် နေထိုင်သော ဘိုးဘွားများနှင့် ဝန်ထမ်းများ အပါအဝင် အသက် ၈၀ နှစ်အထက် နိုင်ငံသားအားလုံးသည် ပထမဆုံး ကာကွယ်ဆေး ရရှိမည့်သူများ ဖြစ်ကြောင်း Spahn က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအစီအစဉ်ကို မတိုးချဲ့မီ ပထမဆုံး ကူးစက်နိုင်ခြေများသောအုပ်စုကို ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းမှာ အနည်းဆုံး တစ်လမှ နှစ်လအထိ အချိန်ယူရနိုင်သဖြင့် ဂျာမန် ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် စိတ်ရှည် သည်းခံကြရန် Spahn က တောင်းဆိုခဲ့သည်။
“ဆိုလိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ဆောင်းရာသီကာလရှည်တစ်ခု တိုင်အောင် ရှေ့ဆက်ရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့အချိန်အတန်ကြာနေရလိမ့်ဦးမယ်” ဟု Spahn က ဆိုသည်။
ဂျာမန် ဆေးဝါးကုမ္ပဏီ BioNTech နှင့် အမေရိကန်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီ Pfizer တို့မှ ထုတ်လုပ်သည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေးကို ဥရောပဆေးဝါးအေဂျင်စီက လာမည့်သီတင်းပတ်တွင် ခွင့်ပြုနိုင်မည်ဟု မျှော်မှန်းထားသည်။ အဆိုပါ အတည်ပြုချက်ကို ခရစ္စမတ်ပွဲတော်မတိုင်ခင် ခွင့်ပြုခဲ့လျှင် ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအား ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် စတင်နိုင်မည်ဟု အစိုးရ၏ ပြောဆိုချက်အရ သိရသည်။
အစပိုင်းတွင် ကာကွယ်ဆေးလုံလောက်မှု ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ဦးစားပေးအုပ်စုများခွဲရန် လိုအပ်ကြောင်း Spahn ထပ်ကာထပ်ကာ အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။ Spahn သည် ဂျာမနီနိုင်ငံ၌ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း အစီအစဉ်အတွက် ကိုက်ညီမည့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း အမိန့်ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးရန်စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းတွင် ဂျာမနီနိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအလုံးရေ ၃ သန်းမှ ၄ သန်းရရှိနိုင်မည် ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန (BMG) ၏ အဆိုအရ သိရသည်။
ကာကွယ်ဆေးများကို ဂျာမနီနိုင်ငံတစ်ဝန်း လူဦးရေဝေစုအလိုက် ဖြန့်ဝေပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် ပထမသုံးလပတ် တစ်ခုလုံးအတွက် ကာကွယ်ဆေးအလုံးရေ ၁၁ သန်းမှ ၁၃ သန်းအထိ ပံ့ပိုးနိုင်ရန် BMG က မျှော်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BERLIN, Dec. 19 (Xinhua) — Germany’s Minister of Health Jens Spahn Friday announcedadetailed plan for the country’s COVID-19 vaccination campaign, saying its first goal is to protect the most vulnerable.
The doses would be distributed to the federal states according to their share of the population. For the entire first quarter, the BMG is expecting to provide 11 to 13 million vaccine doses in Germany. Enditem
A pedestrian walks pastasafety notice board in Munich, Germany, on Nov. 27, 2020. Germany’s COVID-19 caseload has topped 1 million after 22,806 new infections were reported within one day, the Robert Koch Institute (RKI) announced on Friday. (Photo by Philippe Ruiz/Xinhua)
ရိုမေးနီးယား နိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးအသစ် စတင်ထိုးနှံပေးမည့် အစီအစဉ် လုပ်ငန်းများ စတင်ပြင်ဆင်
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကပ်ရောဂါအခြေအနေ မြင့်တက်လျက်ရှိပြီး ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသည့်သူများ တွင် ဓာတ်မတည့်သည့် လက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်